Ahoana ny fomba hisafidianana fandriana ho an'ny saka | Noti saka
Ahoana ny fomba hisafidianana fandriana saka
Ny namanao vaovao dia handany torimaso mandritra ny ora maro, indrindra raha mbola alika alika izy, ka mila fandriana milamina ianao, nefa mora diovina ihany koa. Fa indraindray mety ho sarotra be ny misafidy iray, satria misy modely maro ary misy maromaro izay tena tsara tarehy.
Noho izany dia holazaiko aminao ny fomba hisafidianana ny fandriana ho an'ny saka, mba ho mora kokoa aminao ny hitondra mody any amin'ny toerana tsy isalasalana fa toerana fialan-tsasatra tianao indrindra.
1 Tsara kokoa ny fandriana roa noho ny iray
2 Ampy ve ny fandriana?
Tsara kokoa ny fandriana roa noho ny iray
Ny saka dia tsy matory amin'ny toerana mitovy foana, noho izany dia tsara ny manana fandriana roa na maromaro apetraka amin'ny zoro isan-trano. Ho fanampin'izany, raha mipetraka amin'ny toetrandro mafana be ianao rehefa fahavaratra sy mangatsiaka amin'ny ririnina, dia ho hitanao ny fatoriany amin'ny toerana mangatsiaka na mafana kokoa arakaraka ny mari-pana.
Noho izany, ny »fandriana fahavaratra» dia tsy maintsy karazana karipetra, misokatra, vita amin'ny akora tsy mifoka hafanan'ny vatana be (toy ny volon'ondry ohatra). Fa kosa, ny »fandriana ririnina» dia mety ho fomba zohy, vita amin'ny akora malefaka, toy ny landihazo na volon'ondry.
Ampy ve ny fandriana?
Raha nitondra zanak'ondry nody ianao, dia afaka mandry am-pilaminana am-pandriana kely fotsiny izy izao, saingy… rehefa lehibe izy dia mbola hanompo azy ihany ve? Na dia mety ho sarotra aminy aza ny manasaraka ny tenany »fandrian-jaza», satria toa toa ilay nanjo ilay volom-borona amin'ny sary etsy ambony Ny tsara indrindra dia ny mividy fandriana mieritreritra ny haben'ny olon-dehibe hahatratra volana vitsivitsy. Mitahiry vola kely ianao, izay tsara foana, satria tsy mila mividy amin'ny maha-ankizy ianao.
Ny fifidianana modely na fandriana saka maromaro dia tena manokana. Saingy miaraka amin'ireto torohevitra ireto dia hankafy ny fitsaharanao ianao sy ny saka 🙂.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Cheats » Ahoana ny fomba hisafidianana fandriana saka
Ahoana no itovizan'ny saka sy ny saka?
Ahoana ny fomba filalaovana saka